कोरिया जाने श्रमिक मर्कामा, व्ययभार थपिएसँगै बढ्यो कोरिया जाने लागत ! किन बढ्यो लागत हेर्नुहोस्?
मंग्सिर २६, २०७८ आइतबार 218
काठमाडौं : स्वदेश वा विदेशमा रोजगारीको क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि व्यवहारमा लागु गर्न झन् कठिन हुन थालेको छ।
जिटुजी (नेपाल–कोरिया सरकारमार्फत जाने) सम्झौता रहेको कोरिया रोजगारीमा जाने कामदारले पछिल्लो समय होटल क्वा’रेन्टिन खर्चसमेत बेहोर्नु पर्ने भएको छ। रोजगारीका लागि कामदारले नै सम्पूर्ण होटल क्वा’रेन्टिन खर्च बेहोर्नु पर्ने भएपछि बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरिया जाने कामदारलाई एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलरको सटही सुविधा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। जबकि अन्य गन्तव्य मुलुकमा जाने श्रमिकले प्रतिव्यक्ति दुई सय अमेरिकी डलर मात्रै सटही सुविधा पाउँछन्।
को’भिड–१९ का कारण क्वारे’न्टिन खर्चबापत थप व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यहोरा खुलेको वैदेशिक रोजगार विभागको पत्रको आधार एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलरसम्म विद्युतीय कार्डको माध्यमबाट सटही सुविधा उपलब्ध गराउन केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ।
पछिल्लो समय विदेशी मु’द्राको सञ्चिती कम भएपछि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खर्च कटौती गर्दै आएको थियो। तर कोरिया जानेलाई अत्यावश्यक परेपछि उक्त गन्तव्यमा जाने श्रमिकलाई केही खुकुलो गरिएको बताइएको छ।
पछिल्लो समयमा सामान्यतया वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि राहदानीबापत अधिकतम दुई सय अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। बसोबास र पारिश्रमिकको दृष्टि’कोणले भने कोरिया रोजगारी आकर्षक मान्ने गरिन्छ। पछिल्लो समयमा संसारभरि नै श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्न नहुने आवाज उठिरहेको बेला कोरिया जानेले पनि शुल्क तिर्न नहुने माग गरिरहेका छन्। हाल कोरिया जानेको करिब ८० हजार रूपैयाँ बराबर खर्च हुने गरेको छ। यता सरकारले खाडी मुलुक र मलेसियाको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेको छ। सन् २००७ देखि रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत कोरियन भाषा उत्तीर्ण गर्ने युवायुवती कोरिया रोजगारीमा जाने गर्छन्।
त्यसयता हरेक वर्ष कोरियाले नेपालबाट कामदार लैजाँदा त्यहाँ जानेको संख्या करिब ६० हजार पुगेको छ। तीमध्ये ३० हजार जति कोरियामै रहेको बताइन्छ। मासिक कम्तीमा साढे एक लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक पाइने भएकाले कोरिया रोजगारीमा जान युवायुवतीको भिड लाग्ने गरेको छ। हरेक वर्ष कोरियाले निर्धारण गरेको कोटामा पर्ने ठूलो संख्याका युवायुवतीले प्रतिस्प’र्धा गर्ने गर्छन्।
सन् २०१९ मा लिइएको भाषा परीक्षामा करिब आठ हजार उत्तीर्ण हुँदा ८० हजारभन्दा बढी युवायुवतीले प्रति’स्पर्धा गरेका थिए। नेपालले कामदार पठाउने विश्वका संस्थागत एक सय आठ र व्यक्तिगत एक सय ७२ गन्तव्य मुलुकमध्ये श्रम समझदारी ९एमओयु० र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता ९बिएलए० भएका नौ मुलुकमध्ये कोरिया एक हो।
दुई वर्षदेखि भाषा परीक्षा हुन सकेन को’रोना महामा’री सुरु भएयता कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२० मा हुनुपर्ने कोरियन भाषा परीक्षा हालसम्म हुन नसकेको हो।
सुरुमा सन् २०२० का लागि करिब १० हजार युवा रोजगारीमा कोरिया लैजाने कोटा तोकिएको चर्चा चले पनि पछिल्ला दिनमा त्यसबारे कुनै छलफल नभएको बताइन्छ। सन् २०२० कै भाषा परीक्षा हुन नसकेका कारण सन् २०२१ को कोटा पनि अनिश्चित छ। को’रोना महामा’री सुरु हुँदा पहिला नेपालले कोरिया रोजगारीमा कामदार पठाउन रोकेको थियो। तर पछिल्लो समयमा कोरियाले रोजगारी सुचारु गर्न अनेक सर्त राख्दै आएको छ। -यो खबर नागरिकमा छ ।
Prevडलरको मूल्य १७ महिनाकै उच्च। कति पुग्यो हेर्नुहोस्?
Nextकक्षा कोठा भित्र नै शि’क्ष’क र छात्रा यस्तो ह’र्कत गर्दै गरेको अ’वस्थामा भे’टीए **! भिडि’यो भाइरल हेर्नुहोस्।